Asan-dahalo tany Miandrivazo :: Olona dimy namoy ny ainy, may ny tanàna manontolo • AoRaha
Asan-dahalo tany Miandrivazo Olona dimy namoy ny ainy, may ny tanàna manontolo
Mahery vaika ny asan-dahalo nitranga tany Miandrivazo farany teo. Niharan’ny fanafihana niharo vono olona sy herisetra ary fandrobàna goavana ny tanàna iray any Ambilorano, tamin’ny 15 jolay lasa teo. Nodoran’ireo daholo ny trano am-polony maro tao amin’ilay toerana.
Novonoiny ny telo tamin’ ireo fokonolona. Omby anjatony no lasa ka tsy mbola misy tafaverina. Nahalavo roa lahy tamin’ireo mpanafika ihany koa ny fokonolona. Tsy mbola nahitam-bokany ny fanarahandia nifarimbonan’ny zandary sy ny tafika am-polony maro, hatramin’ny omaly.
« Tokony ho tamin’ny 5 ora maraina ireo dahalo manodidina ny efapolo mitondra basy no namahatra tamin’ny tanàna antsoina hoe Gara, ao anatin’ny fokontany Ambilorano, tamin’ny alarobia 15 jolay 2020. Nisy ny fifandonana tamin’ireo fokonolona satria tsy nanaiky lembenana ireto farany. Vokany, olona telo no maty avy amin’ireo mponina. Nisy roa hafa tamin’ireo dahalo no lavo avy amin’ny tifitr’ireo fokonolona ihany koa. Ankoatra izay dia nisy olona telo avy amin’ny fokonolona no naratra », hoy ny loharanom-baovao nitatitra an’ity zava-niseho tany an-toerana ity.
Nahazo antso ny Zandarimaria tany Ankavandra, taorian’izay, nilaza ny fisian’io fanafihana io. Nidina tany amin’ilay toerana ireo mpitandro filaminana notarihin’ny manamboninahitra iray. Niaraka taminy ny zandary sy tafika am-polony maro.
« Eo am-panaovana hetsika miaramila fampandrian-tany, any Itondy, ireo mpitandro filaminana ireo no natodi-doha any amin’io toerana io, vantany vao henonay ny fanafihana », hoy ny lehiben’ny Zandarimaria any Menabe.
Mifampitady amin’ireo dahalo any an-tampon-tanety sy havoana ary renirano ireo mpitandro filaminana ireo, izay mandeha an-tongotra tsy miato, hatramin’ny omaly. Tsy nahenoam-baovao izy ireo, hatreto. Ny hany fantatra dia toa hoe efa nizarazara ireo dahalo mitondra omby an-jatony ireo. Azo antoka kosa fa samy tsy mbola misy miala an-daharana na ireo fokonolona na ireo mpitandro filaminana manenjika an’ireo jiolahy.
Valanaretina sy fiarenana Manamafy ny tsirim-panantenana amin’ny faran’ny volana ny Filoha
Fandikana fepetra :: Polisy voasazy noho ny fanaovana taingin-droa tamin’ny môtô